Vonoy ny Devoly miaraka amin'ny ady amin'ny sakafo: ny lalao | Androidsis
Manafoana mutant donut tsy mijanona amin'ny Food Battle: The Game
Ady sakafo: tonga toy ny a ny lalao isometrika fijerena arcade izay tsy maintsy hamonoantsika ireo karazana fahavalo mampidi-doza, izay azontsika atao mahita ny donut ratsy indrindra iza no hanandrana hisakana antsika tsy hanohy ny dia an-tsika amin'ity nofy ratsy ity izay ho an'ilay olona mitovy toetra amin'i Homer Simpson miaraka amin'ny fitiavany vola mihinana donut tsy mijanona.
Izahay dia teo aloha lalao tsy manaja, miaraka amin'ny sary tsara, lalao tsara indrindra ho toy ny arcade ary izany dia hitondra anao hanana fotoana mahafinaritra amin'ny fanalana hehy na hafa. Ny Food Battle dia nanangana tamin'ny fomba hafa tsy maintsy namono olona nefa tsy tokony hiasa saina hoe iza no nanao an'io, satria ny fahavalo no ho mamy indrindra hitanao amin'izao fotoana izao amin'ny lalao video amin'ny Android.
1 Mpitifitra Candy Crush
2 Donant Mutant amin'ny prowl
Mpitifitra Candy Crush
Na dia toa iray amin'ireo lalao adala aza izy io, ny zava-misy dia manana singa maromaro izy io izay mahaforona azy ho kilalao tsara ananan'ireo izay tokony hesorintsika havia sy havanana ary angamba ny kilemany ihany dia ny fanarahany ilay maodely freemium. Ho an'ny ambiny, miatrika lalao adala sy mahafinaritra isika izay miresaka momba ny vatomamy, vatomamy ary donut. Sarotra ve ny miteny tsia amin'ny Food Battle, sa tsy izany?
Ankoatr'izay, ity Lollipop rehetra ity dia aseho ho lalao tonga lafatra miaraka amin'ny fanavaozana ny Android farany teo. Raha vantany vao mandefa ny lalao izahay handray ny anjara asan'i Anthony isika, Iza no hiezaka hamaha ny Puzzles isan-karazany, mahita fitaovam-piadiana tsara kokoa ary hamita ny ambaratonga samihafa.
Donant Mutant amin'ny prowl
Lalao video izay miaraka amin'ny vinavinan'ny ataovy hanana fotoana mahafinaritra izahay hanafoanana ireo donant mutan na aiza na aiza ary tsy mila bebe kokoa. Tsy isalasalana fa ny lanjan'izy ireo lehibe ary azo hireharehana satria manatanteraka azy tsara. Mazava ho azy, mandehana manomana CPU tsara hahafahana mamindra ny lalao, satria eo alohan'ny sary 3D sy ity tontolo manankarena sy manankarena siramamy ity dia mila smartphone iray tena matanjaka ianao. Miomàna hamoaka ny big big boss, ilay donut be sandoka be devoly sy devoly. Mandritra ny sisa, mifalia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Manafoana mutant donut tsy mijanona amin'ny Food Battle: The Game
Avereno jerena ny Capture G5 HD, finday avo lenta voalohany an'ny Gigatel
Activision dia mandefa ny Call of Duty: Maherifo aorian'ny Clash of Clans